Miato ny sidina rehetra ny South Africa Mango Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Miato ny sidina rehetra ny South Africa Mango Airlines
Birao fizahantany afrikanina • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Mango Airlines avy any Afrika Atsimo dia niorim-paka taorian'ny tsy fandoavany vola tamin'ny mpanara-maso ny seranam-piaramanidina
Norarana tsy hiondrana an-tsambo na any amin'ny tranokalan'ny Seranam-piaramanidina Afrika Atsimo ny zotram-pitaterana
Mango Airlines no miasa indrindra amin'ny tsena anatiny
Ny fametrahana ny tany dia mariky ny fihenan'ny toe-bolan'ny Mango Airlines
Mango Airlines, ny sandam-bolan'ny fanjakana South African Airways, dia voatery nampiato ny sidina rehetra taorian'ny tsy fahampian'ny fandoavam-bola tany amin'ny mpandrindra ny seranam-piaramanidina ao amin'ny firenena, raha ny filazan'ny olona iray mahalala izany.
Voarara tsy hivoaka na miantsona any amin'ny tranokalan'ny Seranam-piaramanidina Afrika Atsimo ny mpitatitra, izay misy ireo foibe lehibe ao Johannesburg sy Cape Town, hoy ity olona ity, izay nangataka ny tsy hitonona anarana satria tsy mbola natao ampahibemaso ilay hetsika.
Mango Airlines, izay miasa amin'ny tsena anatiny indrindra, tsy afaka jerena amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka. Ny orinasa dia nibitsika ny fialantsiny ho an'ny mpanjifa noho ny “fanelingelenana sy fanemorana ny sidina”, ary nilaza fa “miasa amin'ny vahaolana” io.
Ny fametrahana ny tany dia mariky ny fihenan'ny toe-bolan'ny Mango Airlines. Ny orinasa dia tratry ny krizy coronavirus izay nanimba ny indostrian'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, nanery ny bailout ary nanosika ny mpitatitra sasany ho any amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny governemanta afrikanina tatsimo dia nampiato vetivety ny dia an-habakabaka tamin'ny taon-dasa mba hifehezana ny areti-mandringana COVID-19, ary mangetaheta ny vola azon'ny Mango.